स्लिम बन्ने चक्करमा तपाइँले यस्तो गल्ती त गरिरहनु भएको छैन ? – ramechhapkhabar.com
स्लिम बन्ने चक्करमा तपाइँले यस्तो गल्ती त गरिरहनु भएको छैन ?
धेरै मोटो या धेरै पातलो मानिसको शारीर आर्कषक मानिँदैन । त्यसैले मानिसले आफ्नो शरीरको ख्याल राख्नु आवश्यक छ । मोटाउन होस् या दुव्लाउन खाना र दैनिक क्रियाकलापमा केही परिवर्तन ल्याउने हो भने यो गाह्रो काम भने होइन । तर धेरै मानिस दुव्लाउन र मोटाउन प्रयासरत रहेतापनि आफूले चाहेको शरीर बनाउन सकिरहेका हुँदैनन् । दुव्लाउनको लागि मानिसले गर्ने गल्तीहरुलाई यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
फ्याट, कार्बोहाइड्रेट र सुगरजन्य खानाले शरीर मोटाउने भएकाले स्लिम बन्न चाहनेले यस्ता खानाको मात्रा कम गरेर प्रोटिनजन्य खाना बढी खाने गर्छन् । तर, औसतभन्दा बढी प्रोटिन हाम्रो शरीरले ग्रहण गर्योा भने यो शरीरभित्र फ्याट र सुगरमा परिवर्तन हुन्छ, जसले गर्दा स्लिम हुनुको सट्टा थप मोटाइने जोखिम बढ्छ ।​
व्यवस्थित रूपमा डायटिङ गर्न थालेको सुरुको दुई साता वजन उल्लेख्य मात्रामा घट्छ। दुई सातापछि वजन घट्ने क्रम कम हुन्छ । वजन घट्ने क्रम भएपछि डाइटिङ गरेर पनि स्लिम भइँदैन रहेछु भनेर खिन्न हुने र फेरि पहिलेकै जस्तो खानपान र जीवनशैलीमा फर्किने धेरै हुन्छन् । सुरुको दुई साताजस्तै ह्वात्तै शरीरको वजन कम गर्न सम्भव छैन भन्ने कुरा नबुझ्ने गल्ती धेरैले गर्छन् ।
बढी सुत्नाले वजन बढ्ने डरले डायटिङमा लागेका मानिस कम सुत्ने गर्छन्। तर, स्लिम शरीरका लागि पर्याप्त निद्रा आवश्यक पर्छ । अनिद्राले भोकको स्तर निर्धारण गरिदिने गर्छ । अर्थात्, कम सुत्नुभयो भने तपाईंलाई बढी भोक लाग्छ, जसले गर्दा वजन घट्नुको सट्टा उल्टो बढ्छ ।
स्लिम बन्न चाहनेमध्ये अधिकांशले सधैं एकैखालको व्यायाम गर्ने गर्छन् । कुनै एउटा किसिमको व्यायाम गर्दा यसले शरीरका केही निश्चित भागमा स्टे्रेस पैदा गर्ने र त्यहाँका मांसपेशीलाई चलायमान बनाउने काम गर्छ। तर, सधैं त्यही व्यायाम दोहोर्या उँदा शरीरका अन्य भागमा कसरत पुग्दैन । जसले गर्दा सोचेजति स्लिम बन्न सकिँदैन ।
शरीरको वजन घटाउन चाहने शहरियाहरूले घरभित्रै जडान गरिएका मेसिनहरूमा दगुर्नेलगायत गर्छन् । यसो गर्नु राम्रो हो, तर सधैँ यसैमा अल्भ्किनु चाहिँ पर्याप्त होइन। कसरतलाई बिस्तारै बढाउँदै लग्न सकियो भने मात्रै वजन घटाउने क्रमलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।
कसरत गर्न अल्छी गर्नाले पनि चाहेजति स्लिम बन्न नसक्ने हुन्छ । ुआज ज्यादै थाकेको छु, कसरत गर्दिनँु भन्ने खालका गल्ती धेरैले गर्छन् । यसो भन्नुको सट्टा ुआज १० मिनेट मात्रै कसरत गर्छुु भन्नुस् । कसरत गर्न थालेपछि यसको अवधि आफैँ बढ्छ । किनकि, कसरतले शरीरको थकान र आलस्य दुवै हटाउँछ ।